ဘယ်တော့မှ ပြိုကွဲမသွားနိုင်တဲ့ နာမည်ကျော် Hollywood စုံတွဲများ - MoviesFan
ဘယ်တော့မှ ပြိုကွဲမသွားနိုင်တဲ့ နာမည်ကျော် Hollywood စုံတွဲများ
အချစ်စစ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးရမယ့်ခေတ်ကြီးမှာ ဘယ်တော့မှပြိုကွဲမသွားနိုင်တဲ့ အချစ်တွေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေါင်းဖက်ကြတဲ့ နာမည်ကြီး Hollywood Couples တွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ? Hollywood လို့ပြောလိုက်ကတည်းက ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ပိုပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တွေးမိမှာ အသေချာမှာပါ။ တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ နေရာဒေသတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ အချစ်စစ်မှာ နေရာဒေသ၊ လူမျိုး ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တကယ်အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ သူတို့ရဲ့အချစ်ကို သေဆုံးခြင်းနဲ့သာ အဆုံးသတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Hollywood မှာလည်း လူတိုင်းအားကျရတဲ့
အချစ်စစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြစုံတွဲတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တော်ဝင်မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့ Kate နဲ့ William တို့စုံတွဲဟာလည်း တော်ဝင်မျိုးနွယ်ဝင်တွေ ဖြစ်သော်ငြားလည်း သာမာန်လူတွေလို ရိုးရိုးလေးလက်ထပ်ထားသူတွေဖြစ်ပြီး လူတိုင်းအားကျရတဲ့ စုံတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာ ကလေး ၂နှစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်သောအခါမှ နှုတ်ဆက်သွားကြမယ့်သူတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆကြပါတယ်။
၁၇နှစ်နီးပါး ပေါင်းဖက်လာကြတဲ့ David Beckham နဲ့ Victoria Beckham တို့ စုံတွဲဟာလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးအားကျရတဲ့ စံပြစုံတွဲတစ်တွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဉီးရဲ့ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြပုံဟာ ဂုဏ်သတင်းကြီးမားလှပါတယ်။
လူတိုင်းအားကျရတဲ့စုံတွဲတွေထဲမှာ Beyoncé တို့စုံတွဲကိုလည်း မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ သားသမီး ၃ယောက်မွေးဖွားထားပေမယ့် ဒီနေ့ထိ အသစ်စက်စက်စုံတွဲတွေလို ချစ်ခင်နေကြဆဲပါ။ သူတို့စုံတွဲရဲ့ ကြည်နူးစရာပုံလေးတွေကို instagram မှာလည်း မကြာခဏတင်လေ့ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Shante Broadus and Snoop Dogg
အိမ်ထောင်သက် ၁၈ နှစ်ကျော်ကြာပေါင်းသင်းလာခဲ့ကြတဲ့ Shante Broadus နဲ့ Snoop Dogg တို့ဟာလည်း ဒီ list ထဲမှာနေရာယူနေပါတယ်။ သူတို့စုံတွဲဟာ high school အရွယ်ကတည်းက ချစ်ခင်လာခဲ့ကြတာ ဒီနေ့ထိပါဘဲတဲ့…။ ဒီလိုမျိူး true love ဆိုတာ တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်တောင် ရှိပါ့မလားနော်။
သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ကတော့ အချစ်စစ်မှာ အသက်အရွယ်တွေ ကွာခြားတာမရှိဘူးဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တာပါ။ Amal Clooney ဟာ အသက် ၄၀ ဖြစ်ပြီး George Clooney ကတော့ ၅၆နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ George Clooney ရဲ့ပြောကြားချက်အရ သူတို့အိမ်ထောင်သက်တမ်းဟာ နှစ် ၂၀ ရှိနေပါပြီ သူ့ဟာနောက်ထပ်အိမ်ထောင်ဘယ်တော့မှ မပြုတော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးကတော့ လိင်တူချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး ၁၀နှစ်ကျော် သက်တမ်းရှိနေပါပြီ။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ကတော့ လိင်တူချစ်တူတွေကြားမှာ နာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ စုံတွဲကတော့ Hollywood Couple လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းပြေးမြင်မိမှာ Barack နဲ့ Michelle ဆိုတာ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ချစ်ခင်လေးစားကြတဲ့ပုံစံဟာ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ထိ ကျော်ကြားပါတယ်။ Barack ရဲ့ အမျိုးသမီးအပေါ် လေးစားမှု Michelle ရဲ့ အမျိုးသားပေါ် ချစ်ခင်မှုတွေဟာ အမျိုးသမီးအများစု ကြားမှာရေပန်းစား အားကျရတဲ့ စုံတွဲဆိုလည်း မမှားဘူးပေါ့။
Previous Post: `My Golden Life´ ရဲ့ မင်းသား Park Shi-hoo ကို Horror Romance Drama အသစ်လေးမှာ ပြန်တွေ့ရတော့မှာလား ?
Next Post: ပရိသက်ရှေ့မှောက်ကိုရောက်လာတော့မယ့် Toy Story-4